Ny fambolena any an-trano dia mitombo ny rongony, ny fomba fambolena rongony ara-dalàna any Illinois
Trano fivarotana cannabis any Illinois
Fambolena rongony any an-trano ho an'ny mponina Illinois sasany miaraka amin'ny karatra marijuana ara-pahasalamany dia manomboka amin'ny 1 Janoary 2020 - izao no fiasan'ny Home Grow any Illinois.
Mitombo ny fambolena an-trano any Illinois ho an'ny mponina mpamboly rongony
Firy ny zavamaniry afaka mivoatra any Illinois?
Ny fitomboan'ny rongony any Illinois dia azon'ny marary rongony rongony ao amin'ny trano fonenany voalohany - misy fetra dimy (5) zavamaniry rongony mihoatra ny dimy (5) santimetatra ny halavany - isaky ny tokantrano fa tsy olona tsirairay.
Henoy na jereo ny fandinihana ny Andininy faha-10 Fampiasana ho an'ny tena manokana (fitomboan'ny trano). Tsindrio rohy ho an'ny lalàna feno 610 pejy nolavin'ny Lehiben'ny Illinois
Ity ambany ity ny volavolan-dalàna momba ny fitomboan'ny trano ho an'ny mponina marijuana ara-pitsaboana any Illinois ho an'ny trano fonenany voalohany, miaraka amin'ny fandikana ilay horonantsary sy lahatsoratra momba ilay lalàna.
FIVAVAHANA MISY: Nahazo asa tao amin'ny indostrian'ny harinkarena
FIVAVAHANA MISY: FIVAROTANA MANOKANA AN-TOKOTRA VONDRONA
Makà consult Now
Ny tsiranoka an-trano dia afaka mora foana
Raha ny marina, tamin'ny alàlan'ny fanarahan-dalàna vao haingana momba ny mariana rongony mitombo ho an'ny fitsaboana any amin'ny fanjakana Illinois, dia mihamaro ny mpamboly mitodika amin'ny Internet mba hanoro hevitra.
Ny fahalalana ny fomba hambolena rongony any Illinois dia mitaky fahatsiarovan-tena amin'ny fepetra takiana tsy manam-paharoa amin'ity fanjakana ity - sy ny fitadiavana fomba hiasa amin'izay anananao.
Fenoy ny rindranasa iray ary kitapo ny karatra maha-fanafody fitsaboana
Mampalahelo fa tsy ny olon-drehetra ihany no afaka mamboly rongony any Illinois. Mila mikasa ny hampiasa rongony ianao amin'ny tanjona ara-pitsaboana, ary mila mangataka fahazoan-dàlana ho an'ny rongony ara-pitsaboana - na karatra. Mba hahazoana fahazoan-dàlana dia mila manao fangatahana ianao - ampiasaina mandritra ny folo volana ka hatramin'ny taona vao hikarakarana ny taona 2015. Na izany aza, amin'ny taona 2020, afaka mahazo ny karatra rongony rongony any Illinois ianao amin'ny iray andro na latsaka.
Tsy ny mpamboly rehetra mety handray izany ihany koa no fahazoan-dàlana. Na izany aza, io no dingana voalohany (sy ilaina!) Tokony harahinao.
Tombontsoa amin'ny fitomboan'ny trano
Ny toetran'i Illinois dia toy izany fa ny fitomboan'ny cannabis any ivelany dia tsy voalaza matetika. Noho izany, ianao no tena mahomby mitombo cannabis ao anaty trano.
Betsaka ny tombontsoa azo anaovana izany. Tsy vitan'ny hoe hahay hifehy ny hafananao, ny rivotra, ny hazavana, ary ny hamandoanao ianao fa hanome ny zavamaniry ao anaty tontolo mitombo ihany koa. Afaka mampivoatra ny vokatrao mandritra ny fotoana maharitra.
Tandremo ny zavatra takian'ny tontolo iainana
Raha nanao zaridaina taloha ianao, dia mety ho fantatrao tsara ny mamboly zavamaniry sasany! Tsy mitovy ny cannabis. Mila manitsy ny jiro ianao isaky ny ambaratonga fitomboana ary manome hafanana 40 na 60% farafaharatsiny. Mila hafanana 70 ka hatramin'ny 85 degre ianao (raha mandeha ny jiro) ary 58 ka hatramin'ny 70 degre (rehefa maty ny jiro).
Ianao koa dia mila mihazona ny kalitao rivotra tsara indrindra miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana, seranam-piaramanidina, ary sivana, ary mila misoroka ny tondradrano koa ianao.
Raha tsara vintana ianao amin'ny fahazoan-dàlana hitombo zava-mahadomelina any Illinois, dia angamba hitanao tampoka ianao hanombohana. Aza avela hitsoaka ny tenanao.
Hamarino fa manana fitaovana sy fahalalana tsara ianao alohan'ny hanombohanao. Misy karazan-fitaovana rehetra ilain \_ 'ny hividiananao, ary ny kalitao tsara kokoa omena anao, ny tsara kokoa no ho afakao ho avy eo.
Amin'ny ambaratonga tena fototra, mila ianao:
Efitrano fitomboana na boaty fitomboana
Makà voa tsara
Ho fanampin'ireo fitaovana voalaza etsy ambony, dia mila mampiasa vola amin'ny voa tsara koa ianao. Raha mitombo rongony ho an'ny fitsaboana ianao, te hisafidy tsindry miaraka amin'ny cannabinoids lehibe indrindra ianao. Raha tsy izany, dia miovaova ny karazany tsara indrindra amin'ny zava-maniry, fa ny safidy dia misy sativa, indica, ary hybrida.
Ampianaro ny fandaharam-potoanan'ny mpamaritra
Raha vantany vao azonao ny fitaovanao rehetra, dia mila mampahafantatra ny tenanao amin'ireo dingana rehetra tafiditra amin'ny fampitomboana marijuana ianao. Mazava ho azy fa hanomboka hamboly ny voanao ianao ary miandry azy ireo hitsimoka, nefa avy eo mila manam-paharetana ianao rehefa mivezivezy ny zana-kazo, ny zavamaniry, ny voninkazo ary avy eo dia ny fiotazana sy ny fanasitranana.
Manam-paharetana anefa, dia hihena ny asa mafy ataonao. Ny fianarana ny fambolena cannabis any Illinois dia tsy vitan'ny hoe mahafa-po sy manankarena manokana fa afaka mahasoa anao ihany koa.
Ny sarivongana momba ny fitomboana ao an-tranon'i Illinois dia andininy faha-10 an'ny CRTA ho an'ny fampiasana manokana
Vakio eto ambany ny lalàna IL: Andininy faha-10 amin'ny CRTA
Horonan-tsary marijuana ho an'ny Illinois
(io dia fandefasana horonantsary sy podcast etsy ambony.)
Oh, salama daholo. Nihevitra aho fa mety ny manakaiky kokoa ny mikropono. Fa avia atoy ary jereo ny zava-nitranga omaly alina tany Springfield, Illinois. Hitanao fa tena ara-dalàna ny rongony marijuana. Ankehitriny, rehefa miteny aho fa ara-dalàna ny marijuana, dia tokony ho mendrika izany aho. Ny senat'i Illinois dia nifidy ary namoaka ny ara-dalàna ny marijuana. Ary ny fanaovan'i Illinois ara-dalàna ny marijuana dia ny HB1438. Ary nisy olona nanontany hoe:
"Fa maninona no HB1438 fa tsy SB007?"
Ka hozaraiko haingana dia haingana ny ekipako. Ary avy eo ianao dia ho afaka hahita ireo, ny volavolan-dalàna.
Ka raha mpisolovava rongony ianao ao amin'ny google, izany no hahitanao ahy. Tom Howard no anarako. Izaho dia… Ity no tranonkalako Mpahay lalàna momba ny angovo. Ny adiresin'i Chicago ihany no misy ao. Manana olana amin'ny… Google ny orinasako aho. Fantatrao anefa izany.
Ka na izany na tsy izany dia kopian'ny volavolan-dalàna ity. Ary raha hitako ny fanaraha-maso hitady indray, ho hitanao fa nitady mponina aho. Ny antony nitadiavako mponina… Ary mino aho fa raha mifehy F amin'ity sehatra ity ianao eto… Ary ity sehatra ity, aza manahy, haveriko ao anatin'ny famaritana an'ity horonantsary ity aho rehefa vita. Ho hitanao ny zavatra nolalovan'ny Senatera Illinois omaly. Ary misy ny olona miteny hoe: "Tsy misy trano maniry?" Raha ny marina dia izay no nasehoko anao fotsiny.
Ary raha mandeha ianao ary mitady SB… Tsia tsy SB izany. Ity ny HB1438 izay nolalovan'ny Antenimieran-dehiben'i Illinois omaly, ny faha-9 amin'ny teny 38 izay monina ao dia hitondra anao any amin'ny toeram-ponenan'ny olon-dehibe any Illinois. Ary mbola misy ny fitomboan'ny trano. Na izany aza, nametraka fetra voafaritra manokana izy ireo. Tizy aloha misotro kafe maraina. Andriamanitra ô. Illinois ary indrindra Peoria, Illinois dia tena tsara ho an'ny kafe vaovao natsatsika. Tsy azoko antoka raha afaka mandeha amin'ny toeran-kafa aho.
Ka mbola ho eo ny fitomboan'ny trano. Na izany aza dia nataon'izy ireo antoka fa ho lasa olona iray izany, voafetra ho an'ny mponina any Illinois, 21 taona na mihoatra, izay marary mahafeno fepetra amin'ny programa Compassionate Use of Medical Cannabis pilot. Ireo dia mety hamboly tsy voafetra ny zavamaniry dimy izay mihoatra ny dimy santimetatra ny halavan'ny isam-pianakaviana. Tsy misy foibe mamboly na fahazoan-dàlana ho an'ny mpamokatra asa-tanana. Ary avy eo amin'ity fizarana ity, mponina, dia midika hoe olona efa nipetraka tao amin'ny fanjakan'i Illinois nandritra ny 30 andro talohan'ny fambolena.
Mitombo cannabis ny trano any Illinois
Ka rehefa miteny aminao ny olona fa tsy misy trano mitombo ao amin'ny fananganana ara-dalàna ny fampiasan'ny olon-dehibe an'i Illinois. Fampindram-bola ampahany, tsy misy ny fitomboan'ny trano ho an'ireo olona tsy marihary marijuana. Raha marary marijuana ara-pahasalamana any Illinois ianao dia mbola manana fitomboan'ny trano. Inona no dikan'izany rehefa miteny aho… Tsara fa mamitaka kely fotsiny. Nolazaiko fa nanamafy ara-dalàna ny marijuana i Illinois izay marina amin'ny lafiny teknika. Ity no fotoana voalohany nifidianan'i Illinois hamela ara-dalàna ny marijuana eo amin'ny sehatry ny fanjakana. Ny fanjakana fotsiny dia mazava ho azy, afa-tsy i Nebraska, dia bicameral. Ary dia lasa ny Senatera. Fa hafahafa izany satria SB007 ny faktiora an'ny Senat. Saingy tsy izany ny volavolan-dalàna nolaniana. Nandalo ny HB1438 kosa izy ireo. Ary ny HB1438 mazava ho azy dia volavolan-dalàna momba ny trano. Ary noho izany ny volavolan-dalàna momba ny trano no nampidirina taminay… Ary avy eo novain'i Cassidy tao an-trano mba hahafeno fepetra hivoatra ao an-trano mba ho ireo marary marijuana ireo ihany. Ilay zavatra hafa izay halehako dia miverina miverina amin'ny fizarana efijery eto haingana be. Tsy ny fizaranao ny… fotsiny no hizarako anao… Ka mankanesa any, eto indray, eo amin'ny pejy faha-40 an'ny Illinois Med…
Miseho in-2020 ny fehezanteny 32m any Illinois Adult Use Cannabis Law
Eny, tsy marijuana ara-pitsaboana izany fa marijuana ataon'ny olon-dehibe izao. Eo no ahitanao mitombo ny tranonao raha marary ara-pahasalamana ianao. Fa andao hiresaka momba ny taona 2020. Tokony ho…… 2020. Fa maninona no tsy mamaly ny fitendry ahy? Eny ary, mamaly izany. Tadiavo ny fifehezana… Eny ary, efa mandeha izao. Misy olana ara-teknika kely foana. Ka andao hitady ny teny hoe 2020. Ary ny fe-potoana 2020 dia hiseho in-32 ao amin'ity lalàna ity. Fa maninona isika no mitady ny teny hoe 2020? Satria raha mandalo izany isika dia hiditra amin'ny fotoana mahaliana amin'ny tantaran'i Illinois izay ahitana fampiharana marobe ho an'ny karazana fahazoan-dàlana hampiasa marijuana ho an'ny olon-dehibe amin'ny Internet amin'ny taona 2020. Farafaharatsiny, izany fotoana izany dia tokony horaisina ireo fangatahana ireo . Ny daty taratasy mena voalohany dia ny volana Mey 2020. Fa raha ny marina dia andao atomboka amin'ny daty taratasy voalohany, 1 Janoary 2020. Ny 1 Janoary 2020 no daty ahafahanao mandeha mividy marijuana fampiasan'ny olon-dehibe. Mety koa io daty io no daty mahomby an'ity.
Omaly izahay dia tao amin'ny fandaharana niaraka tamiko niresaka ny vaovao momba ny fanarahan-dalàna rongony. Misoratra anarana izao hiaraka aminay. Isaky ny alarobia amin'ny 2 ora dia mandinika ny vaovao momba ny fanarahan-dalàna rongony isika mandritra ny herinandro. Ary avy eo dia manana vaovao ara-dalàna momba ny rongony tena lehibe tokoa izy ireo raha vantany vao miala amin'izany fampitana izany isika. Vis-a-vis any amin'ny Antenimieran-dàlan'ny Illinois marijuana mandalo. Miala tsiny. Tsy manana olona manipy an'izay afaka mameno fotoana aho. Ka ny 1 Janoary 2020 dia ho ara-dalàna ny rongony ary ara-dalàna ny mividy. Saingy tsy ho ara-dalàna ny mividy amin'ny olon-drehetra. Raha ny tokony ho izy dia ara-dalàna ny mividy amin'ny fikambanana dispensary fampiasan'ny olon-dehibe alohan'ny fotoana. Ka eto aho. Ka ireo no hitranga amin'ny ankapobeny ny orinasa marihuana mpitsabo dia ho raibeny. Ary ireo no afaka manomboka mivarotra rongony amin'ny mpividy amin'ny daty voalohany amin'ny 2020.
Mazava ho azy fa izao fotoana izao dia miseho in-2020. Ary tsy mijery aho… Ity no izy. Eto isika, eto. Izay no notadiaviko. Ity fe-potoana 32 mey 1 ity fe-potoana farany, fanomezana ny fahazoan-dàlan'ny fikambanana dispensary ho an'ny olon-dehibe alohan'ny 2020 Janoary 1. Ny sampana, ny departemanta mazava ho azy dia midika ho departemantan'ny fambolena, dia manome lisansa fandaminana hatramin'ny 2021 ho an'ny olon-dehibe alohan'ny 75 Mey 1 . Ary avy eo dia hataon'izy ireo ny fampiharana ny fampiasana olon-dehibe, eny, ny fampiharana dia tsy hatao raha tsy amin'ny 2020 Oktobra 1. Angamba ianareo ry zareo, mety fantatrareo angamba izany momba ahy. Misolo tena ireo orinasa hemp maro aho. Ary ny fangatahana hemp dia tsy naseho ampahibemaso raha tsy tamin'ny 2019 aprily tamin'ity taona ity. Marina izany, iray volana lasa izay ka androany. Ary tamin'izany fotoana izany dia nipoaka ny findaiko ary nanampy olona maro aho.
Fa izao dia hanana zavatra mitovy amin'izany isika. Izay olona marobe no maniry ny hanana iray amin'ireo lisansa 75 ireo. Ary te hangataka ny iray amin'ireo lisansa ireo izy ireo alohan'ny 1 Mey 2020. Saingy tsy ho mora toy ny fahazoan-dàlana hemp izay tena sariaka sy mahafinaritra ny mpampiasa izany. Jeff Cox sy ny departemantan'ny zavamaniry fitsaboana any amin'ny departemantan'ny fambolena any Illinois dia nanao asa lehibe tamin'io fangatahana io. Fa manana varavarankely lava kokoa ianao. Fa maninona no ho tsy hisy ny fisoratra raha tsy amin'ny 1 Oktobra ary tsy ekena aorian'ny 20 Janoary? Ary avy eo ianao dia tsy hamoaka ireo fampiharana ireo raha tsy amin'ny 1 Mey. Saintsaino izany. 1 Oktobra, 1 Jan, 1 Mey… Antso an-tariby avy any South Carolina. Mety tsy ianao no mpanjifa voalohany niantso ahy androany.
Ka manana ny 1 Janoary 2021 ianao dia amin'ny fotoana tokony hampiasanao ny fangatahanao. Tsy mahazo ny fangatahana ianao raha tsy amin'ny 1 Oktobra 2019. Ary tsy hisy ny 75. Hisy mihoatra ny 75. Miezaka ny hampiditra ny tongotr'izy ireo eo am-baravarana izy ireo. Nefa tsy hanambara izay mandresy azy ireo mandritra ny dimy volana izy ireo. Ary ireo no karazana fampiharana izay mety ho isa isa. Ary ho goavambe ireo rindranasa satria tsy maintsy apetrakao ity ekipa ity hanamarina ireo boaty rehetra izay ho tonga ao amin'ireo fampiharana ireo. Ka azonao izany, raha manandrana manakatra ny 200 ianao ary mety misy teboka 212 amin'ity. Tsy hanao horonantsary isika izao, satria misy fivoriana tokony ho 45 azoko.
Ary noho izany dia afaka miresaka kely momba ny fotoana isika ary ny fitomboan'ny trano dia mbola eo ho an'ireo marary marijuana ara-pitsaboana. Andao hitsambikina indray isika amin'ny fizarana lamba ary hahita daty litera mena mahaliana hafa ianao. Ka ity iray ity, hiantohana ny fanaparitahana ara-jeografika ireo [condotional 00:08:58] tompon'ny fahazoan-dàlana hampiasa olon-dehibe. Ireto manaraka ireto dia manana fahazoan-dàlana homena isaky ny faritra BLS ho bla, bla, bla. Ary noho izany dia mipetraka eto Peoria aho, handeha telo izahay. Tena tsara freakin cool. Hahazo efatra ny faritra St. Louis, Mazava ho azy fa 47 ny any Chicago. Ary somary lavitra ity. Midika izany fa betsaka kokoa ny any Illinois… Midika izany fa tsy mahazo afa-tsy iray i Rock Island noho izy nitomany mafy. Fa nahazo telo i Peoria. Ie, fomba hanaovana an'izany [Jehan 00:09:24]. Tsara.
Ary toy izany ireo iray hafa, misy ny fambolena 21 Janoary. Andao hojerentsika, ny departemanta fahavalo… Oh, tsy azoko antoka akory hoe inona izany. Ny programa dia manome alalàn'ny programa mpanamory fiaramanidina rongony any amin'ny oniversite. Oh, tena milay izany. Zavatra izay tsy fantatro akory… tsy fantatro akory izay tao. Andininy 25, Cannabis College, programa pilotam-piofanana ho an'ny rongony. Marina izany ry Illinois, mandehana any amin'ny oniversite eny amin'ny fiarahamonina ary mitana rongony lehibe. Fuck aho mety hisoratra anarana aza. Ny zavatra momba izany dia ireto dia faktiora roa samihafa. Ny volavolan-dalàna izay SB007 izay tsy nolanian'ny Antenimieran-doholona, ​​fa kosa ny Senate dia nandany ny HB1438 araka ny nampidirina tao amin'ny trano. Ity volavolan-dalàna ity dia maharitra 610 pejy. Ka ny… Misy fandaharana mpanamory fiaramanidina marijuana any amin'ny oniversite any izay tsy misy olona miresaka. Tsy dia mahagaga ahy izany rehetra izany. Fa toa tonga any Illinois, lehibe amin'ny rongony. Mamy tsara izy io.
Ary miala tsiny aho amin'izany. Vao avy nandinika ireo taona 2020 ireo aho. 32 amin'izy ireo no ao amin'ilay hetsika. Ary izao dia hizaha azy io indray aho ary hiresaka haingana momba izay mety ho lafiny mampientanentana indrindra amin'ny fampiasana ara-dalàna ny fampiasan'ny olon-dehibe Illinois lanin'ny Senatera omaly. Ary antenaina fa hiresaka momba izay tranga mety indrindra isika. Ary tsy haiko raha hitranga izany. Hiresaka momba azy io haingana isika. Fa asa-tanana 40 no mitombo fahazoan-dàlana amin'ny 1 Jolay 2020. Ary avy eo izy ireo dia tsy afaka mivarotra raha tsy aorian'ny 21 Desambra 2021. Ary avy eo ny 21 Desambra 2021 dia [tsy henoina 00:11:19] hatramin'ny fahazoan-dàlana miisa 60 hafa. Noho izany dia hisy 100 farafaharatsiny, 100 amin'izao fotoana izao, lisansa fitomboan'ny asa tanana. Ary avy eo misy fameperana ireo fahazoan-dàlana mitombo asa tanana. Ary handeha aho… Ary ity misy iray hafa amin'izy ireo. Ary tsy misy lisansa mpamboly asa-tanana mihoatra ny 150 sy ny fameperana hafa. Ary avy eo ity ny fampiharana izay horesahintsika ihany koa.
Ireo mpamboly asa tanana dia mahaliana amin'ny heviny fa izany no ho fomba ahafahan'ny olona miverina mankao amin'ny habakabaka rongony. Ary misy fetrany ny hoe iza sy izay mety hanana azy rehetra. Hisy fitohanana be dia be ao ho an'ny fizarana, ho an'ny asa tanana. Ary avy eo aorian'ny filalaovana lalao dia mijanona i Illinois… Satria toy ny tsy maninona, mitombo ianao, mandroso, mamindra. Right? Iza no mitondra ny vilany? Ho lasa fahazoan-dàlana vaovao ho avy io, fitaterana. Ka rehefa afaka izany, ny iray amin'ireo daty ireo, ny iray amin'ireo daty taratasy mena izay ao, dia afaka mahazo karazana fahazoan-dàlana hafa ianao. Ary ny dispensary sy ny foibe fambolena ary ny processeur dia tsy ho afaka hitondra ilay rongony. Tsy maintsy hatolotr'izy ireo amin'ny mpitatitra manana fahazoan-dàlana hitaterana rongony izany. Ka hosaronako ity satria mamono ahy ny allergy.
Raha tsy fantatrao, i Illinois dia mijaly mafy, ary ny fijalian'ny firenena manontolo amin'ny mety ho iray amin'ireo tondra-drano ratsy indrindra hatramin'ny The Great Flood of like 1927. Na inona na inona nolazain'izy ireo tamin'ny vaovao. Tsy tena any an-tsaha ny katsaka. Marihitra ny tanimbary amin'ny ankapobeny. Mety hamboly vary angamba ianao. Izany… Toy ny haavon'ny rano amin'ny tanimbary any Illinois izahay. Ary heveriko fa tena namerina kely fotsiny ny voly hemp. Iza no hiraharaha? Omaly dia nifidy ny hanao ara-dalàna ny marijuana ny antenimieran'i Illinois. Antenaina izay hitranga ankehitriny, satria miato ny zoma 31 aprily ny mpanao lalàna ao Illinois. Androany dia handany ny volavolan-dalàna azy manokana ny House, HB1438. Rahampitso dia hanao sonia azy io ho lalàna i JB Pritzker. Fa angamba haingana loatra izany. Angamba mila fotoana izy ireo, fantatrao, ny mitrandraka ireo karazana lohateny. Ary izany dia hahagaga iray volana avy aminy mivoaka ny faran'ny herinandro voalohan'ny volana Mey ary avy eo manao ity valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ity. Izay namokarany ireo pejy sivy noforoniko pejy ireo. Ary ity dia ho pejy ihany koa. Fa ity iray ity dia ho pejy voahitsakitsaka hifantoka be amin'ny fitomboan'ny trano ho an'ny marijuana ampiasain'ny olon-dehibe any Illinois. Ary avy eo raharaha hafa fanampiny.
Ireo pejy 610 rehetra ireo, raha nandalo izy io, dia hanamora kokoa ny famoronana atiny. Saingy somary mampatahotra ihany koa. Satria rehefa manao an'ity atiny ity aho dia milahatra amin'ny Internet ary miantso anao ny olona. Ary avy eo dia tian'ny olona ianao hanampy azy ireo hametraka ireo rindranasa ireo. Ary mazava ho azy fa eo an-tsambo tanteraka ianao amin'izany. Ary avy eo be dia be… Handeha… Mety ho fotsy volo aho afaka herintaona. Ho hitantsika eo. Manantena aho fa afaka matory. Ka rahampitso, antenaina fa handany ny volavolan-dry zareo avy eo ary avy eo JB Pritzker dia manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Nilaza ny rehetra fa zavatra mahatalanjona izany ho an'ny fanjakan'i Illinois. Ary ho tanteraka izany. Ary avy eo mandroso mankany. Na izany aza tsy haiko raha hitranga izany anio. Tsy hahagaga ahy izany. Tena mahavariana izany raha lasa tany amin'ny fanjakana mpanao lalàna voalohany nanangana marijuana i Illinois. Ary raha hanao izany dia samy mila ny roa fa tsy ny Filoham-pirenena, ny governora ary ireo Antenimieram-panjakana roa tonta. Ary avy eo dia mbola nilain'izy ireo… Ary azoko atao…
Mba hamaranana an'ity dia hizara ny faran'ny volavolan-dalàna momba ny fampiasana olon-dehibe any Illinois aho. Nofaranana tamin'ny lahatsoratra 999 isan-karazany izany. Mino aho fa i Herman Cane 00:15:21 no nanangana azy. Araka ny hitanao dia 610 pejy ny halavany. Tsy misy haingam-pandeha na fanemorana. Oadray. Yeah. Satria angamba napetrak'izy ireo… Okay. Ankehitriny ny coderako any India dia mila zavatra. Tsara izany, izany fotsiny no karazana ahy. Mahazo fotoana kely ianao dia mila zavatra ny olona. Eny ary, tonga tany amin'ny birao aho. Misy olona miditra.
Ny fampiasana manokana ny cannabis any Illinois
Lisansa rongony ara-tsosialy ara-tsosialy Virginia
by Tom | Enga anie 26, 2021 | Lisansa fananganana marijuana any Virginia
Fahazoan-dàlana ho an'ny rongony ara-tsosialy any Virginia Tamin'ny faha-7 aprily 2021, ny Antenimieram-pirenen'i Virginia dia nandany ny volavolan-dalàna momba ny trano tamin'ny 2312, izay nanome ara-dalàna ny marijuana ampiasan'ny olon-dehibe any Virginia. Mihatra ny volavolan-dalàna amin'ny 1 Jolay 2021. Tao anatin'ilay Volavolan-dalàna, nifantoka tamin'ny sosialy ny mpanao lalàna Virginia ...
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny rongony any California
by Tom | Enga anie 26, 2021 | Lisansa fandraharahana rongony any California
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa rongony any California Mihombo hery ny indostrian'ny rongony any California, miaraka amin'ny isan'ny olona maniry ho anisan'ny hetsika rongony. Raha te ho anisan'izany ianao, dia mety manontany tena ianao hoe ahoana no fomba hahazoanao orinasa rongony ...
Programme an'ny fananana ara-tsosialy Arizona
by Tom | Enga anie 19, 2021 | Lisansa fananganana marijuana Arizona
Fandaharam-pahefana momba ny fananana ara-tsosialy ao Arizona Ny departemantan'ny serivisy ara-pahasalamana ao Arizona ("ADHS"), izay manampahefana mifehy rongony ao Arizona, dia namoaka ny volavolan-dalàna mifehy ny Programa momba ny fananana ara-tsosialy ("SEOP"). Ny fanehoan-kevitra momba ny volavolan-dalàna dia ...
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana hanamboatra orinasa Virginia
by Tom | Enga anie 13, 2021 | Virginia manala ny otrikaretina, Lisansa fananganana marijuana any Virginia
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana amin'ny sehatry ny famokarana Virginia Rehefa manandrana manangana trano fanamboarana dia tokony handinika mialoha ny fizotran'ny fahazoan-dàlana ireo mpandraharaha mety ho avy. Ny fahalalana ny fahazoana fahazoan-dàlana hamokarana dia tokony ho iray amin'ireo laharam-pahamehana ...
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny mpamokatra marijuana any Virginia
by Tom | Enga anie 12, 2021 | Lisansa fananganana marijuana any Virginia
Ahoana no fomba ahazoana fahazoan-dàlan'ny mpamaky marijuana any Virginia Fomba ahazoana lisansa mpamokatra marijuana any Virginia? Ny fahazoan-dàlana mpivarotra ambongadiny dia iray amin'ireo karazana fahazoan-dàlana mahaliana kokoa. Ary any Virginia dia tsy misy afa-tsy 25 amin'izy ireo. Tokony ho vonona àry ianao. Vao haingana -ny 7 aprily, ...
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana amin'ny fanadinana any Virginia
by Tom | Enga anie 12, 2021 | Uncategorized, Lisansa fananganana marijuana any Virginia
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana amin'ny toeram-pitsapana any Virginia Raha mipetraka any Virginia ianao ary te-hiditra amin'ny indostrian'ny rongony, ny fanokafana toerana fanandramana dia iray amin'ireo safidy azonao atao. Raha te-hanao izany dia mila mahafantatra ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana hizaha toetra ianao. Vao tsy ela ...
Ahoana ny fomba ahazoana lisansa mpivarotra fivarotana any Virginia
Ahoana no fomba ahazoana lisansa mpivarotra varotra any Virginia Te hivarotra rongony any Virginia ianao? Avy eo ianao dia tokony hianatra ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana amin'ny mpivarotra any Virginia. Ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpivarotra dia iray amin'ireo fahazoan-dàlana dimy napetraka ao amin'ny lalàna vaovao. Vao tsy ela akory izay -ny 7 aprily- HB 2312 sy ...
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana mamboly Virginia Raha te hahay mahazo fahazoan-dàlana Virginia Cultivation ianao dia mila manamarina ny lalàna vaovao napetraka tamin'ny fanjakana momba ny programa marijuana ampiasain'ny olon-dehibe. Vao tsy ela akory izay -ny 7 aprily- ny HB 2312 sy ny SB 1406 dia voafidy ho ...
Lisansa rongony ao Minnesota
by Tom | Enga anie 4, 2021 | Fahatokisana rongony Minnesota
Tamin'ny 1 mey, ny komity momba ny fahasalamana sy ny politika dia namoaka volavolan-dalàna hamoahana marijuana amin'ny alàlan'ny latsa-bato 11-8, hampiakatra ny totalin'ny komity izay nandroso ny tolo-kevitra ho 10. Ny volavolan-dalàna dia ahafahan'ny olon-dehibe 21 taona na mihoatra mividy ary mahazoa ...